भरतपुर अपडेट : रेनुको मत अग्रता, कसकाे मत कति ? • raradiodarpan.com
भरतपुर अपडेट : रेनुको मत अग्रता, कसकाे मत कति ?
भतरपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रकी मेयर उम्मेदवार रेनु दाहाल दुई हजार मतले अगाडि छिन्। ३० हजार २५२ मत गणना गर्दा उनले ११ हजार ९० मत पाएकी हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले ९०९० मत पाएका छन्।
प्रचण्डकी छाेरी रेनु पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबाट मेयर पदमामा उठेकी हुन्। यस्तै भुँइकटहर चुनाव चिन्हबाट बागी उम्मेदवारी दिएका जगन्नाथ पौडेलले ४९५८ मत पाएका छन्।
उपमेयरमा गठबन्धनको कांग्रेसबाट उम्मेदावरी दिएका चित्रसेन अधिकारीले १३ हजार २४५ मत पाएका छन्। उनका प्रतिस्पर्धी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका हिमाल गुरूङले ७३७१ मत पाएका छन्।
मुस्ताङका चार स्थानीय तहमा एमाले र एकमा नेपाली कांग्रेसले जितेका छन् । पाँचवटा गाउँपालिका रहेको मुस्ताङको लोमान्थाङमा अध्यक्षमा एमालेका टसी नर्बु गुरुङ र उपाध्यक्षमा एमालेकै छ्युमी विष्ट निर्वाचित हुनुभएको छ ।
यसैगरी लो–घेकर दामोदरकुण्डमा एमालकै लोप्साङ छोम्पेल (राजु) विष्ट अध्यक्षमा र एमालेकै छिरिङ ल्हामो गुरुङ उपाध्यक्षमा विजयी भएका छन् । त्यस्तै बारागुङ मुक्तिक्षेत्रको अध्यक्षमा एमालेका रिनजिङ नामगेल गुरुङ र उपाध्यक्षमा पनि एमालेकै ढिकी गुरुङ तथा थासाङको अध्यक्षमा एमालेको प्रदीप गौचन निर्वाचित हुनुभएको छ ।
त्यस्तै घरपझोङको अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका मोहनसिंह लालचन र उपाध्यक्षमा कांग्रेसकै जमुना थकाली निर्वाचित हुनुभएको छ । जिल्लाभर १३५ पदमध्ये एमालेले ९७, कांग्रेसले २४, माओवादीले दुई,
राप्रपाले दुई र नेकपा एकीकृत समाजवादीले एक सिट जितेका छन् । उम्मेदवारी नपरेपछि दलित महिला सदस्यको नौ पद रिक्त भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ ।
एमालेबाट लोमान्थाङको वडा नम्बर २ मा कर्म नामग्याल गुरुङ, ३ मा आङजेन गुरुङ, ४ मा छिरिङ धिण्डु गुरुङ, लोघेकर दामोदरकुण्डको १ मा टै धुन्टु ठकुरी, २ मा थुक्तेन छिरिङ गुरुङ, ३ मा झब्याङ तेन्जिङ गुरुङ,
४ मा झयाङ छेसा गुरुङ, ५ मा पासाङ गुरुङ, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र १ मा प्रमेश गुरुङ, ३ मा विनोद गुरुङ, ५ मा सुरेन्द्र गुरुङ, घरपझोङ ३ मा फलेन्द्रप्रसाद थकाली, ५ मा प्रदीप थकाली र थासाङ २ मा गौतम शेरचन वडा अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।
कांग्रेसबाट लोमान्थाङ १ मा पेमा आङग्या गुरुङ, ५ मा ढुकके विष्ट, वारागुङ मुक्तिक्षेत्र २ मा न्होरु गुरुङ, ४ मा कर्म घ्याचो गुरुङ, घरपझोङ १ मा आशबहादुर थकाली, २ मा मनबहादुर हीराचन, ४ मा यामप्रसाद थकाली, थासाङ १ मा सुरेश थकाली, ३ मा हरिप्रसाद गौचन, ४ मा नरेन्द्र शेरचन र ५ मा रुपेश तुलाचन वडाध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ ।
१३५ पदमा २२६ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए । एकल उम्मेदवारी परेको लोघेकर दामोदरकुण्ड र घरपझोङ गाउँपालिकाको तीन÷तीन वटा वडाका जनप्रतिनिधि निर्विरोध भएका थिए । कूल दश हजार ४८५ जना मतदातामध्ये सात हजार ५५७ अथवा ७२.०७ प्रतिशत मत खसेको थियो ।